Last updated: May. 19 2018 | 2 min akhri
Haweenka mar walba dooneysaa ninka ay nolosha u leedahay tayo gaar ah. Liiska ma aha quruxsan dheer, laakiin inta badan waxay noqotaa mid adag in la helo kuwaas oo dhan tayada in nin keli ah. Sidaas, haddii aad leedahay inta badan ee tayada hoose wada hadlay, fursada dhiirri oo iyaga ku faraxsan haweenka noqon doonaan wax ka badan ragga ka maqan tayada kuwa.
Urta wanaagsan oo waxay leeyihiin dareen wanaagsan ee labiska
Haweenka oo keliya neceb Dad ku uriso xun. Sidaas, Marna ma ilaawi ku raadisid shiir-dhawr ah marka ay ka baxday naag. Hubi in shiir aad isticmaali ur wanaagsan aad ku. Urta cadar ama shiir abuuraa ka dib markii in xiriir la jirkaaga ka kooban yahay ay caraf udgoon iyo ur jirkaaga. Sidaas, shiir ama cadar soo uraya weyn on saaxiib nafarayseen inaan wax ma laga yaabaa in aad uriso in wanaag. Sidaas, aado doorasho dayey oo la tijaabiyey; ha xigmad adkaan marka qaadanaysid doorashada ee shiir.
Haweenka jecel inuu la jiro ragga dareen wanaagsan ee labiska noqon. Dumar badan, rag liidata labisan yihiin turnoffs weyn. Si aad u yaab dumarka ragga waa in mar walba sii joogo ilaa-to-date ula socdaan is araggii iyo sii sameeyo isbedelo in sida ay u labistaan. Si kastaba ha ahaatee, Nin waa inay xidhaan kaliya dhisan in eegi wanaagsan isaga, ma wax tijaabo ah oo aan ku dhamaystiri nooca jirka uu.
Traditional noqon kartaa sexy aad; sidaa, haddii aadan ayaa isha ku xidhaan dhar Casrisan, tijaabiso jir ah, laakiin ma aan tegi karo isku darka qaldan sida tee iyo denim (doortaan midabada si caqli ah, denim buluug had iyo jeer ugu fiican yahay).
Noqo hufan, laakiin xasuuso daacadnimo badan noqon karaa mid waxyeello
Haweenka mar walba rabaan in ay qayb muhiim ah nolosha iyada nin ee noqon; iyada uma dulqaadan karo been ku saabsan arrimaha muhiim ah. Saasaana, Nin waa in had iyo jeer isku dayaan in la helo xidhiidh aad u hufan xaaskiisa ama gabadha uu saaxiibka. Raggu waa marnaba iloobin in ay la wadaagaan dhammaan aragnimada ay haysteen ama ay nolosha, fiican ama xun oo naagtii la noloshooda.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira maroojin ah ee Qisada; halka waa in aad noqdo mid hufan oo u yimid naagtii aad ku jirto xiriir la leh, aadan awoodin in ay si waxashnimo ah oo daacad ah. Baro in aad ku ammaaneen xitaa marka iyada oo aan raadinaya ugu fiican; marna xad dhaaf ah iyada wac, xitaa haddii uu helay 10 pounds; iska ilaali iyada oo wacaya cunto kariye xun xataa haddii ay dhab ahaantii waa. Raac talooyinkan iyo aad u sugnaaday nolol farxad hubaal.
Haweenka sida Niman jecel dhallaanka iyo marnaba ka baqimayno caawinta dadka waayeelka ah. In si kale loo dhigo, haweenku ay doonayaan ninka ay nolosha u noqon naxariiseed. Isku day inaad tahay nin kuwa tusaalooyinka wanaagsan, qof ka maran ee ay dadka isaga ka ag dhow, nin oo la mahadiyo odayaasha.
Inta badan dadku galaan ay qalad ah inay noqoto mid quuri iyo naxariis laawayaal kaliya inay muujiyaan inay ku xoogan yihiin. Dumarka isagoo hab xoog, isagoo daryeel iyo naxariis iyo isagoo awood u leh in ay ilaaliyaan.
Ma leedahay sifooyinkaasi? Haddii aadan, isku dayaan in ay u horumariyaan; ma waxaad u baahan doontaa inaad geliso dadaalka badan ee soo koraya ay sifooyinkaasi waa fududdahay badan dhismaha jirka ah kaamil ah ama barashada talaabo qoob ka ciyaarka ah.
Waa maxay nooca haween yihiin rag raadinayso? Tani waa su'aal jawaabaha badan.…
Furaha Nin qalbigiisa ma aha inuu caloosha iyada oo loo marayo. Waa iyada oo uu…
Haddii aad weydiiso qof dumar ah waxa uu doonayo, ayay u jawaabi doonaa iyaga oo isku dayaya si ay u sharxaan…